ဟယ်ရီလင်းရဲ့ မေးခွန်းများ (Thit Kaung Eain) | MoeMaKa Burmese News & Media
သစ်ကောင်းအိမ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၄
ဘုရားသခင် အလိုမရှိ ငွေကြေး အလိုမရှိ
လူ့ကမ္ဘာကို ခင်ဗျား ဘာလာလုပ်တာလဲ…
လကမ္ဘာကို ခင်ဗျား ဘာသွားလုပ်မှာလဲ…
(၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၄)
(ကဗျာဆရာ့ကဗျာကို ကိုဦးဘလောက်ကနေ တွေ့လို့ ကူးတင်ပါတယ်)
One Response to ဟယ်ရီလင်းရဲ့ မေးခွန်းများ (Thit Kaung Eain)
Catwoman on February 27, 2014 at 9:35 am
Do not insult Buddha for he is our savior and he s the greatest. You have no idea how much you re missing without god.. You can question Buddhism we have the. Answers. Don’t be stupid and stop creating bad kamma by insulting buddha